रेफ्रि नभई पनि खेल हुन्छ र ? « नेपाली मुटु
« भिष्म प्रतिज्ञा
प्रचण्डले भने रे, “यसै लाज हरायो, उसै लाज हरायो ।” »
शान्ति प्रक्रिया र संबिधान निर्माणका लागि भने पनि दलहरु यसलाई एउटा खेल मात्र भनिरहेका छन् । उनीहरुको क्रियाकलाप हेर्दा यो एउटा खेल भन्दा अरु केहि हो भन्ने नै लाग्दैन । कहिलेकाँही खेलको नियमबाट बाहिरिए जित्नका लागि जे पनि गर्न तयार छन् हाम्रा दलहरु । अत अन्तराष्ट्रिय समर्थन प्राप्त अनमिनलाई यो खेलको रेफ्रि नै मान्नु पर्छ । अब खेल नै खेल्ने भए पछि रेफ्रि त पक्कै चाहिन्छ नि । रेफ्रि बिनाको पनि खेल हुन्छ र ?
जति नै मन नपराए पनि सरकारले अनमिनको म्याद चार महिना थप गर्ने भएको छ । तर उसको कार्यदेशको पुन ब्याख्या गर्ने गरि उसको म्याद थपिन लागेको हो । अनमिनको उपस्थितीको सुरु देखि नै विरोध गरिरहेको भारतको पनि यसमा भुमिका रहेको शंका गरिन्छ ।
नेपालमा अनमिनको भुमिका रेफ्रि बराबर पनि छैन । किनभने अनमिनले गलत भन्न सक्छ, तर रातो कार्ड देखाउँन पाउँदैन । अनमिनको भुमिका नैतिकतामा आधारित छ भने पनि हुन्छ । उसको यो कार्यदेशलाई स्वयम् संयुक्त राष्ट्रसघंले पनि कमजोर भनिसकेको छ । यसबाट थाहा हुन्छ अनमिन आफ्नो कार्यदेश प्रति सन्तुष्ट छैन ।
अनमिनले पाएको कार्यदेश पनि राम्ररी निभाउँन नसकेको आरोप झेलिरहेको अनमिनसँगको विवाद गत माघबाट निकै चर्किरहेको छ । गत माघ १८ गते सरकारले शिविरमा रहेका माओवादी लडाकूहरूको नाम, ठेगाना र तस्विरसहितको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन पहिलोपल्ट अनमिनलाई आग्रह गर्यो । त्यही पत्रमा शिविरबाट बिदा गरएिका अयोग्य लडाकूबारे पनि विवरण मागिएको थियो । दुई सातासम्म कुर्दा पनि त्यस्तो विवरण नपाएपछि सरकारले फागुन ३ गते अर्को पत्र पठायो । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको त्यो आग्रह नै अहिले विवादको कारण बनेको छ । अनमिनले बृहत् शान्ति सम्झौता र हतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौतालाई अघि सार्दै यस्तो विवरण दिन नमिल्ने अडान लिएपछि विवाद घनिभूत हुँदै गयो । अनमिनले गलत व्याख्या गरेको दाबी गर्दै विस्तृत विवरण पाउनु पर्ने सरकारी अड्डी कसिलो भएपछि त विवादले गम्भीर रूप नै धारण गररिहेको छ । यसैले नेपालका केहि राजनीतिक दलहरु अनमिनलाई अंकुश लगाएर मात्र नेपालमा राख्न हुने विचार पोखिरहेका छन् ।
नेपालमा भएको विवादलाई वान कि मुनले पनि प्रस्ट भाषामा स्पष्टिकरण दिईसकेका छन् । उनले नेपालमा अनमिनको कार्यदेशका बारेमा छलफल गर्ने समय नभएको बताएका छन् । यो जुहारीमा जसले जिते पनि आखिरमा नेपालमा अनमिनको उपस्थिती मात्रले पनि राजनीतिक दलहरुलाई जिम्मेवार बनाउँने र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउँन मद्दत गर्ने मत पनि धेरैको छ ।
अमेरिकालाई चिठ्ठा, इङ्ल्याण्ड पनि उत्रियो
This entry was posted on September 6, 2010 at 9:09 pm	and is filed under समाचार विश्लेषण. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
4 Responses to “रेफ्रि नभई पनि खेल हुन्छ र ?”
नियम संगत खेल खेल्न पो रेफ्रि चाहिन्छ । नियम बाहिर उफ्रिनका लागि रेफ्रिको के काम ? अनमिनलाई खेदाएर दाँई गर्ने यीनीहरुको सोचाई हो ।
अब अनमीन माओवादीमा लाग्यो भन्नु पनि चाहिदो कुरा हो त ? जे पनि बोल्छन् है । लाज छैन गतिछाडाहरुलाई ।
Gaurav BK said
अनमिनको के काम ? हामी आफ्नो कुरा हामी आफै मिलाउँन सक्दैनौ र ? युद्ध सुरु गर्दा अनमिनलाई सोधेर गरेको थियो र अहिले माओवादी अनमिन खोज्छ ?
Ram kumar Rai said
सोल्टी यो खेल होइन नि त । so we don’t need refree…
बिना रेफ्रिको खेल खेलिरहेको नेपाली राजनीतिको खेलाडीलाई रेफ्रि बस्दा केहि अफ्ठ्यौ भएको होला नि !!!